Sheekada filimka Raazi: Alia Bhatt si wacan ayay kaga baxsatay filimkan la amaanay fariintiisa sirdoonka – Filimside.net
Taariikhda: May 11, 2018
Waxaa tiyaatarada la saaray filimka Raazi oo sheeko ahaan laga soo min guuriyay buuga caanka ah Calling Sehmat kana hadlaayo gabar reer Kashmir ah oo gudaha Pakistan dowlada Hindiya u direyso si ay usoo basaasto xogta ciidanka Pakistan.
Star Cast: Alia Bhatt, Vicky Kaushal, Rajit Kapur, Shishir Sharma, Jaideep Ahlawat, Ashwath Bhatt, Amruta Khanvilkar, Soni Razdan.
Qiimeyna: 4/5 (Afar xidig)
Waqtiga Uu Soconaayo: 2-saac iyo 18-daqiiqo
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Raazi: Qaabka sheekada sirdoonka iyo basaasnimada loo dhigay ayaa ah mid adag oo aad kuu xiiso galineyso, haka reebin bandhiga Alia Bhatt oo si wacan kuu soo jiidanayo min bilaaw ilaa dhamaad.
Muxuu Ku Liitaa Filimka Raazi: Qaybta hore ama halka saac hore waxaa yara wanaagsaneyd in faaf reebidala adkeeyo, madaama ay ku jiraan muuqaalo aan loo baahneyn lagana maarmi karay.
Fariinta Filimka Raazi Oo Kooban: Wuxuu ku saabsan yahay filimkan nolosha gabadha lagu magacaabo Sehmat (Alia Bhatt), waa gabbar maskiin ah kuleeh dhigato balse aabaheed ka tirsan yahay saraakiisha ciidamada Hindiya qaybta siroonka.
Xiriirka ka dhaxeeyo labad dal Hindiya iyo Pakistan ayaa maalin walbo sii xumaanayo waxayna qarka u saaran yihiin inay dagaal wada galaan labadaan dal deriska ah xiliga la joogana waa sanadii 1971.
Hidayat (Rajit Kapur) oo ku nool magaalada Srinagar ayaa Pakistan u safraayo asigoo ganacsade iska dhigaayo balse aan la ogeyn inuu sirdoonka Hindiya ka tirsan yahay.
Hidayat (Rajit Kapur) waa nin iska xanuunsan siina gaboobayo balse sarkaalka ugu sareeyo ciidamada Pakistan Syed (Shishir Sharma) ayaa ku qal qaalinayo inuu la shaqeeyo balse Hidayat wuu iska diidaa madaama uu xanuunsan yahay.
Hidayat wuxuu iska xanuunsan yahay wuxuuna sarkaalka reer Pakistan Syed (Shishir Sharma) wey diisanaa gabadhiisa inuu ku daro wiilka uu sarkaalka reer Pakistan dhalay laguna magacaabo Iqbal (Vicky Kaushal).
Syed (Shishir Sharma) wuxuu aqbalaa in wiilkiisa Iqbal (Vicky Kaushal) lagu daro Sehmat (Alia Bhatt) inkastoo Pakistan iyo Hindiya xiriirkooda wanaagsaneyn.
Laakiin Sehmat (Alia Bhatt) u jeedka ay Iqbal u guursatay waxay tahay inay basaasto Pakistan marka ay gudaha Pakistan tagtana xog walbo ciidamada Hindiya la wadaagto, waxaana tababar adag siinayo Khalid Mir (Jaideep Ahlawat) oo ciidamada sirdoonka Hindiya ka tirsan
Sehmat (Alia Bhatt) ninkeeda Iqbal (Vicky Kaushal) wuxuu siinaa xuriyad ku filan xitaa ma dooneyso inay nolosha la wadaagto laakiin markii dambe waxay ogaanee in seygeeda yahay qof aad u wanaagsan.
Sehmat (Alia Bhatt) waxay guda galee basaasnimadeeda ayadoo ogaaneyso xog xasaasi ah oo ku saabsan in ciidama Pakistan ay weerar gaadmo ah ku qaadi rabaan maraakiibta dagaalka Hindiya.
Haddaba Sehmat (Alia Bhatt) hawl galka qarsoodida ah ay ka wado gudaha Pakistan nafteedana ku weyn karto maku guuleesan doontaa ayadoo bed qabtana Hindiya maku soo laaban doontaa?
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Raazi: Meghna Gulzar si wacan ayay isugu daba riday sheekada filimka Raazi waxayna siweyn ugu amaanan tahay gabadhaan sida ay sheekada sirdoonka u adkeesay, dareen iyo qadiyad wadaninimo ku dhex dartay si sheekada u noqoto mid dhameestiran.
Si gaar ah filimka Raazi wuxuu xiiso weyn leeyahay marka Alia gudaha Pakistan gaarto ama kala barka marka la gaaro sheekada marnaba indhaha lagama qaadi karo.
Bandhiga Jilaayaasha: Alia Bhatt waxay sameesay door ka weyn da’deeda waxayna kaga baxsatay si taariikhi ah waana hubaal in abaal marino badan ku heli doonto sameynta filimka Raazi.
Alia Bhatt waxay qaaday talaado ay awoodeeda fanka Hindiya kusii adkeesay ayadoo hogaanka Raazi qabatay siweyn ayay bandhig ahaan kaga baxsatay qaabka basaasnimada, dareenka murugada badan, xiriirka waalidka iyo jaceylkeeda inay ka hor marineyso bad baadinta dalkeeda.
Vicky Kaushal waqti badan filimkan kuma jiro laakiin doorkiisa xadidan waa mid heer sare ah oo uu amaan ku helay dhan walbo.
Ruug cadaa Rajit Kapur oo Alia Bhatt aabaheed filimka ku matalaayo isagana door wacan ayaa la siiyay, sidoo kalena dhamaan jilaayasha kale si wacan ayay kaga baxsadeen doorarkooda sida Shishir Sharma iyo Jaideep Ahlawat.
Gunaanad: Raazi waa filim qayaano iyo sirdoon si heer sare ah isugu daba riday Meghna Gulzar fariin ahaana aan laga xiiso dhigeyn una dheer tahay bandhiga Classic ah Alia Bhatt shaashada ka muujisay taasi ayaa xaqiijin doonto mashruucaan in daawadayaasha siweyn usoo jiidan doono dhanka Boxoffice-ka guul wacan ka gaari karo.
Fadlan Hoos Ka Daawo Goos Gooska Filimka Raazi:
Waxaa Aqrisay 830